Warar - Soosaaris cusub oo cusub- RGB Daahfurka Dynamic LED Strip & RGB Dynamic LED Panel
Waxaan riixnaa laba nooc oo shey cusub ah - Dynamic Curtain RGB LED Strip & Dynamic RGB LED Module.
Dhisme kastaa wuxuu sheegaa sheeko, sidoo kale gudahana waa inuu sheegaa. Fududeynta qaab-dhismeedka nalka fudud ee firfircoon ee ka socda HYM Lighting ayaa kaa caawin kara qaabeynta sheekadaas. Naqshadda qaabku waxay hubisaa inay ku habboon tahay gudaha gudaha, weyn ama yar, dhexdhexaad ama raaxo. Ku raaxayso qaabkeeda, maalinba maalinta ka dambeysa, sanadba sanadka ka dambeeya. Haddii aad go'aansato inaad beddesho gudahaaga, waxaad si fudud ugu beddeli kartaa daabacaadda iftiinka iyo animation-ka.
Qaybaha Dynamic LED waxay kaa caawinayaan inaad abuurto qaab dhismeed firfircoon laba arrimood:
Samee sawirro nolosha ku soo kordha ama ku dar dhaqdhaqaaq iyo jawi aan caadi ahayn derbiyada iyo saqafyada
Way fududahay in la beddelo daabacaadda ama nuxurka LED-ka. La jaanqaado jilitaankaaga samada ee saqafka hadba xilliyada, tusaale ahaan: daruuro xilliga guga, qoraxdu xagaaga, roobab dayrta iyo baraf xilliga qaboobaha.
Wareegtada 'Dynamic RGB Curtain LED Strip' ee ka faa'iideysiga waa fududahay in la rakibo, waxaan qaadannaa kaarka xakamaynta K-8000C si loogu diyaariyo LED-ka.
The Dynamic RGB LED Panel wuxuu korsadaa K-8000C kaarka xakamaynta si loogu diyaariyo LED-ka hab maamuuska DMX512.
Maanta laga bilaabo wixii ka dambeeya, dharka iyo LED-ka si ay ugu hadlaan luqad cusub ayaa ah isbeddelka isbeddelka ah ee ku yimid, jebinta xaaladda iyo aasaasida sheeko sababtoo ah LED-ka mar dambe ma ahan mid taagan laakiin waa la dhaqaajin karaa
Marka way sharxi kartaa daabacaadda sawirka dharka waxayna siin kartaa iftiinka saxda ah tani waa dhul cusub oo loogu talagalay iftiinka dambe, tani waa in la sameeyo dukaan, dukaamo Windows ah, qol lagu soo bandhigo, waxqabadyo, bandhig cusub oo cusub: sanduuqa iftiinka firfircoon, sida sanduuqa iftiinka dhaqameed , Kaas oo ka kooban qaab dhismeedka aluminium iyo daboolida dharka caadada u ah, laakiin jebinta qaabka gadaasha dambe ee moduleka LED-ka, waa sidaad rabto inaad ku guuleysato saameynta muuqaalka ah ee barnaamijyada.
Natiijooyinka waa muuqaal muuqaal ah oo dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa iftiinka oo noqda kor u kac muuqda markasta oo diiradda la saaro isbeddellada cusub iyo teknoolojiyada cusub, si loo kobciyo, iyaga oo ka dhigaya kuwo soo jiidasho iyo soo jiidasho leh. USES softiweerka-K-8000C barnaamijyada loo yaqaan 'LED', barnaamijka LED-ka wuu is beddeli doonaa iyadoo loo eegayo sawirka daabacaadda waqti ka waqti. Sidaa darteed, farsamadu aad ayey u fududahay: Qaabdhismeedka aluminium ee aluminium iyo nidaamka iftiinka dambe ayaa weli ah sidii hore, laakiin si loo helo badeecada cusub, waxaa loo baahan yahay oo keliya in la beddelo habka ay wax u yihiin laambadda iyo moobiilku u noqon karaan isbeddel fudud oo fudud ayaa aasaas u ah mustaqbalka qalabka.